NOSY NOBODOIN’NY FRANTSAY : Nametraka fitoriana teny amin’ny Hcc i Pastora Mailhol
Omaly maraina 10jolay 2018 no tonga teny amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) Ambohidahy ny filoha mpanorina ny antoko Gideona Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara, nametraka fitoriana mitaky ny hamerenana ireo Nosy malagasy ambara ho “îles Éparses” amin’i Madagasikara. 11 juillet 2018
Fitsinjovana sy fanarenana hiadanan’ny vahoaka Malagasy sy ny taranaka fara aman-dimby no tanjona tratrarina amin’izany. Marihina fa isany Kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao ity farany ary nanambara fa tsy ijerena anarana antoko na fiavina ny ady atao amin’ny fahantrana eto amintsika.
Fantatra moa fa efa nisy ny fifanatonana teo amin’ ny Gffm sy ireo fikambanana nitaky ny Nosy Malagasy ka hisy ny fifanomezan-tanana ataon’ izy ireo amin’izany mba ho tombontsoan’ ny taranaka any aoriana. Manao antso avo amin’ ny vahoaka rehetra manerana ny Nosy koa ny Pasitera Mailhol mba hiara-hientana ka hitaky ireo Nosy Malagasy ireo hiala eo ambany vahoan’ ny Frantsa.
Tokony hisy araka izany ny fanontaniana ny hevitry ny vahoaka Malagasy amin’ ny alalan’ ny Fitsapan-kevi-bahoaka raha eken’ ny Malagasy ny hitakiana ireo taniny mba hiverina ho fananantsika madiodio. Toa zary badoina sy ankalazaina hatrany fa mahantra ny Firenena malagasy kanefa ny harena an-kibon’ ny tany ao anatin’ ireo Nosy malagasy bodon’ ny Frantsay.
Raha ny fikarohana nataon’ireo manam-pahaizana momba ireo harena an-kibon’ ny tany ao anatin’ ireo nosy efatra, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India ary Eropa, dia efa ampy hampandrosoana an’ i Madagasikara. Tafiditra ao anatin’ ny fandaharan’ asan’ ny Pasitera Mailhol moa ny fametrahana laharam-pahamehana ny hamerenana ireo Nosy Malagasy ireo amin’ i Madagasikara. Tantara mitohy hatreto ny fiandrasana ny valin’ity fitakiana ity.
MAINTIRANO Mitohy ny tolon’ny sedikaly
2018-07-16 20:57:58 par
Mitohy ny tolon’ny sedikaly aty amin’ny CISCO Maintirano tsy mahavaha olana vacation tsy ampy ary karama ny asa efa vita ireny 2017. Mitadiava hevitra hafa dia ny famaliana ny fangatahan ny sedikaly ihany. Misîkoa fifanarahana ambadika miaraka izare tre